China DC Motor Linear Actuator FD13 IP66 orinasa sy mpanamboatra | Sanxing
Ny FD13 Linear Actuator dia mitovy amin'ny acteuror FD1, ny fahasamihafana lehibe indrindra dia ny laharana IP. Ny acteuror linear FD13 dia miaraka amin'ny isa avo lenta amin'ny fiarovana ny tontolo iainana-IP66 sy ny tabataba ambany. Ity acteuror linear IP66 ity dia natao hiatrehana ny fidirana amin'ny vovoka tanteraka sy fiarovana amin'ny fisidinan'ny rano. Ampiasaina betsaka amin'ny fitsaboana, fanaka, mandeha ho azy ary indostria, ohatra, fandriana fitsaboana, seza nify.
6000N (Push) / 4000N (hisintona)
tapaka lalan-dra + 175mm
Azo ahodina 90 °
Mainty / Volondavenona
Fampandrenesana amin'ny fangatahana
(1) Azafady mba apetraho ny maodely actuator linear, kapoka, halavany nesorina, fahafaha-mitondra, hafainganam-pandeha ary herinaratra. Raha manana fepetra manokana amin'ny fampiasana ny angona sy ny angon-drakitra teknika ny mpampiasa dia afaka mamolavola ho anao koa ny orinasanay, ary tsy maintsy asehonao ny fepetra takiana manokana rehefa mametraka baiko.
(2) Raha mila kojakoja actuator linear ny mpampiasa, toy ny boaty fanaraha-maso, famatsiana herinaratra ary fanaraha-maso lavitra, ny orinasan-tsika dia afaka manome andiany feno, izy io koa dia azo omena irery.
(3) Manomboka amin'ny daty fandefasana ao anatin'ny 12 volana, amin'ny toe-javatra mahazatra, miaraka amin'ny olan'ny kalitaon'ny actuator linear vokatry ny tsy fahombiazan'ny mekanika na ny fahasimbana, ny orinasa no tompon'andraikitra amin'ny fikojakojana.
1.Mety ampiasaina ivelan'ny varavarana ve ny mpiorina FD13?
Eny, tsara ny orana, aleo tsy ampiasaina ao anaty rano.
2.Afaka mividy santionany ve aho hizaha toetra voalohany?
Eny, santionany 1 no ekena.
3.Momba ny acteuror FD1 sy FD13, iza no tsara kokoa?
Raha mampiasa azy eo am-baravarana ianao dia amporisihinay ianao hampiasa ny acteuror FD1, ny max 6000N ny fahaizan'ny entana, mitovy amin'ny FD13, ka mahomby kokoa. Raha mampiasa azy eny ivelan'ny varavarana ianao na mila tsy tantera-drano, safidy tsara ny FD13, saingy ambony lavitra ny vidiny.
Teo aloha: Fast Speed ​​Electric Cylinder Actuator FD9
Manaraka: Fanodin-tongotra pedal FA
Fanaraha-maso lavitra ny fandriana any amin'ny hopitaly, Actuator haingam-pandeha haingam-pandeha, Actuator Linear Micro, Fanaraha-maso lavitra ny fandriana fitsaboana, Fanaraha-maso lavitra ny fandriana elektrika, Fanaraha-maso lavitra an-tariby ho an'ny hopitaly,